क्यान्ड टूना बर्गर - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
क्यान्ड ट्युना बर्गर
11 मिनेट6 व्यक्ति150२ क्यालोरी
क्यान्ड टूना बर्गरहरू मेरो सबैभन्दा नयाँ खोजी हुन्। A सजिलो, सरल, ग्लूटेन-रहित र अत्यधिक पौष्टिक डिनर जुन थप रूपमा, आँखाको पलकमा बनेका छन्।
यी बर्गरहरू मूल रूपमा यसको साथ बनेको हुन्छ क्यान्ड ट्युना र रोल्ट जई। सामग्री सजिलैसँग पेन्ट्रीमा फेला पार्न र विशेष गरी सुपरमार्केटमा।
जे होस् यी बर्गरहरूको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो द्रुत बनाउन र १ 15 मिनेट भन्दा कममा तपाइँसँग तिनीहरूको सेवाको लागि तयार हुनेछ।
1 क्यान्ड ट्युना बर्गर
2 के तपाईं क्यान्ड ट्युना बर्गरको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
तयारी समय: 10M
खाना पकाउने समय: 1M
कुल समय: 11M
टुना को १una० ग्राम राम्रोसँग निकालियो
100 ग्लूटेन-मुक्त जईको
G० ग्राम प्याज
खुलेको लसुनको लौंगहरू, प्याज पनि राख्नुहोस् र ठूलामा काट्नुहोस्, र गिलासमा धोइएका र सुकेका अजमोदका पातहरू राख्नुहोस्। हामी दौरान काट्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 5।
मिश्रणलाई स्ट्रेनरमा हटाउनुहोस् र पानी हटाउन चम्चाको पछाडि राम्रो निचो गर्नुहोस्।
गिलास नधोई हामी अण्डाहरू र मौसममा स्वाद राख्छौं। हामीले पिट्यौं Seconds० सेकेन्ड, गति 30/ १/२।
राम्रोसँग निचोरेको ट्यूना, ओट्स र प्याजको मिश्रण थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Seconds० सेकेन्ड, गति,, बाँया पालो।
हामी प्रत्येक about6ग्रामको balls बलहरू बनाउँछौं। हामी तिनीहरूलाई थोरै सपाट बनाउँदछौं मिनी बर्गर बनाउन।
हामीले तिनीहरूलाई तातो प्यानमा खैरो र हल्का जैतुनको तेलले तेल लगायौं। जब तिनीहरू तल सुनहरी हुन्छन्, हामी तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्नेछौं ताकि तिनीहरू पूर्ण रूपमा सकियो।
एकचोटि दुबै पक्षमा ब्राउन भयो, हटाउनुहोस् र उनीहरूको चिसो हुन अघि सेवा गर्नुहोस्।
के तपाईं क्यान्ड ट्युना बर्गरको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
तपाईंले जान्नुपर्ने पहिलो कुरा यो हो कि यी बर्गरहरू तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने, टुनाको साथ बनेका हुन सक्छन् जैतून, सूर्यमुखी वा प्राकृतिक तेलमा टुना।
यस विधिको एक रहस्य भनेको प्याज र टुना दुबै जान्छ राम्रोसँग सूखा ताकि तिनीहरूसँग अधिक आर्द्रता नहोस्।
यी बर्गरहरूमा दलिया छ, त्यसैले तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरू कति पौष्टिक छन्। र ठ्याक्कै यसको कारणले गर्दा, तिनीहरू छन् प्लेटमा सेवाको लागि आदर्श।
तपाईं एक सानो संग तिनीहरूलाई मौसम पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेयोनेज, तोरी o केचअप तिनीहरू एक थिए भने परम्परागत बर्गर
तपाईं उनीहरूसँगै जान सक्नुहुन्छ तरकारीको अनन्तता। केहि sautéed शतावरी, मशरूम वा ब्रोकोली वा हरियो पात सलाद वा केही चेरी टमाटर तेल र oregano लगाईएको प्रयास गर्नुहोस्।
एक सूप वा क्रीम र यी प्रस्तुतीकरण सुझावहरूको साथ तपाइँसँग हुनेछ एक द्रुत र सन्तुलित माछा आधारित डिनर साताको दिन सेवा गर्न।
यसको अतिरिक्त तिनीहरू स्थिर गर्न सकिन्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई क्लि film् फिल्ममा व्यक्तिगत रूपमा लपेट्नु पर्छ। तपाईं तिनीहरूलाई १ घण्टा स्थिर गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईं सबै सँगै ठूलो झोलामा राख्न सक्नुहुन्छ। यसले उनीहरूलाई एक अर्कामा टाँसिनबाट रोक्छ र तपाईलाई सबै समयमा आवश्यक पर्ने एकाईहरू लिन सक्षम हुनुहुनेछ।
महत्त्वपूर्ण: त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसले ग्लूटेनसँगको असहिष्णुता वा एलर्जीको साथमा जईमा असहिष्णुता विकास गरेको छ र यस घटकको उपभोग गर्न सक्दैन। यदि यो तपाईंको केस हो भने, यो नुस्खा तपाईका लागि उपयुक्त छैन र तपाईंले यसलाई संकेतित दिशानिर्देशहरू अनुसरण गर्दै ढाँचाउनुपर्नेछ।
थप जानकारी - मेयोनेज / घरेलु तोरी / केचअप / Finger औंला-चाट बर्गर व्यंजनहरु
स्रोत - नुस्खा परिमार्जित र कोकिना डिलरन्ट वेबसाइटबाट Thermomix® को लागी अनुकूलित
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, Years बर्ष भन्दा बढी, माछा
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » Celiac » क्यान्ड ट्युना बर्गर
मारी कारमेन भन्यो
शुभ दिउँसो, तपाई महान देखिनुहुन्छ।
दलिया पिठोमा छ कि फ्लेक्समा?
मारी कारमेनलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मारी कारमेन:
यस नुस्खामा, दलिया प्रयोग गरिन्छ तर यदि तपाईंसँग यो छैन भने तपाईं सधैं केही सेकेन्डको लागि फ्ल्याक्सहरू क्रुश गर्न सक्नुहुनेछ घरमा आफ्नै आटा बनाउन।
प्याज, रगत सॉसेज र पाइन नट कोका
म सर्तहरू स्वीकार गर्दछु